Google gosiputara Pixel 3 na Pixel 3XL ka ha rie uwa na ihe ndi ozo | Gam akporosis
Ọ dịkarịsịrị anyị anụwo banyere ma igba egbe na ihe ọhụrụ Google Pixel 3. Ruo ọtụtụ izu, ọ ga-afọ nke nta ka anyị kwuo ọnwa, nkwụsị ahụ akwụsịbeghị ịpụta iji bulie ọkwa kachasị elu nke anyị na-akpọkarị hype. Agbanyeghị, anyị na-eche Google ka nwere ụfọdụ ikpeazụ nkeji anya na ya okpu ma si otú iju anyị niile.
Googlefọdụ Google Pixel 3 na 3 XL nke na-abata ka nke ahụ ndị fans gị nwere ike ịnweta ekwentị Google ọzọ Na aka gị. Ma karịa ihe niile nke na-eburu nnukwu ebumnuche nke nnukwu G nwere n'aka ya: ngwaọrụ ndị na-enye ahụmịhe dabere na AI + Software + Hardware. N'ihi ya, Google Assistant bụ otu n'ime ntọala ndị ga-ewetara anyị ahụmịhe nke ngwaike bụ akụkụ ọzọ nke atọ ahụ.
1 Google na-eme ya ọzọ
2 Ihe kacha mma: AI + software + ngwaike
3 Nkọwapụta teknụzụ nke Google Pixel 3 na 3 XL
4 N'ihu na ihuenyo na-ekwu banyere Google Pixel 3 na 3 XL
5 Detailsfọdụ nkọwa na ha ahịa
Google na-eme ya ọzọ
Nnukwu G anaghị akwụsị iju anyị anya na anyị na-eche ihu otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ nke mepụtara kachasị n'oge ndị a. Betsda nza ka ị nweta ekwentị gị nke kachasị elu Ha na-alụ ọgụ ihu na ihu megide nke Samsung na Apple; Onye ga - ekwu n'oge a mgbe a katọrọ ya nke ukwuu na nke mbụ Google Pixel nwere oke ọnụ ahịa.
Mana ekele ezigbo foto, nke bu otu afo n’iru ma e jiri ya tụnyere onu ahia nke ahia ndi ozo, na oru di itunanya n’ime inwe Android n’ime uzo di nma ya, enwetala Google inwe ike itu isi na akara Pixel nke n’aga n’iru n’igosi oke ike. O doro anya na mgbe ha depụtara ihe ụfọdụ siri ike, ha ga - abụ ekwentị karịa nke anyị nwere ugbu a.
Ihe kacha mma: AI + software + ngwaike
Ewezuga ịnwe Android Pie 9.0 dị ugbu a site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, pikselụ ọhụrụ a ha nwere ọzọ nnukwu foto. Ha nwedịrị ike ịnweta site na nhazi abụọ na isi iji jiri ihe mmetụta 12.2 MP, ebe na igwefoto n'ihu ọ na-anọ na 8MP na anya abụọ na-eme ihe ha maka foto otu; anyị na-atụ anya etu foto ga-esi jiri ọnọdụ eserese kacha mma nke Pixel.
Agbanyeghị na ihe dị mkpa bụ na igwefoto Google ga-eburu isi ihe sitere na Google taa: AI + ngwanrọ + ngwaike. Ngwa igwefoto bụ ihe atụ doro anya nke nke a iji bụrụ ọkwa dị elu karịa asọmpi ndị ọzọ.
Iji mee ka ọhụhụ abalị ahụ ọbụlagodi Enweghị mkpa ịse foto na-enweghị flash. Nke ahụ bụ, sọftụwia kọmputa ga-elekọta ileghara obere foto esighi ike. A ngosi n'okpuru na ihe oyiyi.
Nkọwapụta teknụzụ nke Google Pixel 3 na 3 XL
Eke Google Google
Nlereanya Pixel 3 Pixel 3 XL
Usoro njikwa A gam akporo 9.0 achịcha A gam akporo 9.0 achịcha
Ihuenyo 5.5 sentimita asatọ - Full HD + AMOLED 18: 9 6.3 "QHD + (2960 x 1440) P-OLED 18.5: 9
Nhazi Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
Nchekwa n'ime 64GB / 128GB 64GB / 128GB
Isi ụlọ 12.2 MP - f / 1.8 - 1.4um - OIS - Pixel Core - 4K / 30FPS 12.2 MP - f / 1.8 - 1.4um - OIS - Pixel Core - 4K / 30FPS
Igwefoto ihu 8 + 8MP - f / 2.2 - 1.4um - vidiyo vidiyo 8 + 8MP - f / 2.2 - 1.4um - vidiyo vidiyo
Batrị 2.915 mAh na ikuku na-akwụ ụgwọ 3.430 na ikuku ikuku
Akụkụ 145.6 x 68.2 x 7.9mm 158 x 76.6 x 7.9mm
Ihe ndị ọzọ NFC - Nta mkpịsị aka agụ - Bluetooth 5.0 - GPS - USB ụdị C - IP67 NFC - Nta mkpịsị aka agụ - Bluetooth 5.0 - GPS - USB ụdị C - IP67
N'ihu na ihuenyo na-ekwu banyere Google Pixel 3 na 3 XL
del Pixel 3 XL anyị gosipụtara ihuenyo ya 6,5 ″ P-OLED, mgbe Pixel nkịtị na-adị na ụdị ụdị OLED. Ekwentị abụọ na-apụta dị ka nke kachasị mma na ihuenyo ahụ, ebe ọ bụ na Snapdragon 845 chip si na Qualcomm na-esonyere 4GB RAM (ọ nweghị ihe ọzọ dị mkpa) yana ebe nchekwa dị elu karịa 64 ruo 128GB dabere na ụdị ahọrọ .
Afọ a Google emeela ka o buru ibu ime ka onwe gi puta ìhè. Ọ dị oke egwu ohere niile fọdụrụ maka ihe ekwesịrị ịbụ ọkwa na usoro nke ihe ahụ. Ma, o buru oke ibu na o nwere ike iyi ikwubiga okwu ókè. Anyi na-eche na ha ga-enwe ihe kpatara ha jiri mee ka amaghi ama di otua; Anyị achọghịdị iche gbasara ohere niile a ga-eri n’ime ha PUBG Mobile ụdị egwuregwu o Fortnite.
Detailsfọdụ nkọwa na ha ahịa
Ee ee anyị gara n'ihu enweghị ọdịyo (ọ dị ka ebighi ebi ka ọ dị na ika a) na ekweisi ndị ahụ maka ụdị njikọ USB-C. Ekwesịrị ikwu na ngwugwu ahụ gụnyere, ewepụ ekweisi, USB-C na 3.5mm dongle, ụdị USB-C na ụdị USB ọzọ na ụdị USB ọzọ-C na USB type-A dongle. Nke a bụ n'ihi nsogbu nke ịga USB Type-C na ịga site na audiojack… Cables n'ebe niile.
Pixel Guzo bu ihe ozo n’ime ihe ndi ahu chajịa ekwentị gị ma jiri olu gị chịkwaa ya dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ google ụlọ. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịnwe Pixel 3 gị na tebụl akwa ahụ ma soro ya nwee mmekọrịta dị mfe.
Google Pixel 3 adịlarị maka ndoputa maka ego nke 849 euro maka ụdị 64GB, ebe mbipute 128GB na-aga euro 949. Pixel 3XL lelga ruru 949 euro na ụdị 64GB na 128GB nke na-aga euro 1.049.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Habemus Google Pixel 3 na 3XL: nnukwu G na-aga ihe niile na nnyemaaka na foto